निरौला भन्छन्, संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दु राज्य हाम्रो बटम लाइन हो
निशान न्युज असार ३१, 2074
तपाईहरूले स्थापना गर्न खोजेको राज्य व्यवस्था चाँही कस्तो हो ? यसले नेपालको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दु राज्यको स्थापना । कानुनी राजको विशिष्टता र सभ्यताको महत्व भएको राज्य व्यवस्था । अर्थात् संवैधानिक शासन व्यवस्थाभित्र मानव अधिकारको संरक्षण र मर्यादित स्वतन्त्रताको अधिकार सुरक्षित भयो भने राज्यमा विशिष्टताको स्थिति सिर्जना हुन्छ । राज्य कानुनद्धारा संचालन भएको हुनुपर्दछ । प्रजातन्त्र मर्यादित, व्यवहारिक र आधुनिक । राज्यमा भएका जनताले जबसम्म गाँस, बास र कपासको सुविधा पाएको हुँदैन, तबसम्म प्रजातन्त्र आएको हुँदैन । प्रजातन्त्रमा सम्पत्ति र स्वामित्वको अधिकार निश्चित हुन्छ । जातीय छुवाछूत र सामाजिक अवहेलनाका कुराहरू अन्त्य हुन्छन् । कानुनी मर्यादाभित्र रहेर जनताले समान रूपमा बाच्न पाउनुपर्दछ । त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ ।
अर्को पक्ष हो नेपालको अस्तित्व खतरामा छ । जनताहरू अवहेलित छन् । सरकार निरंकुस छ । निरंकुस शासनको अन्त्य गरेर जनताको प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना गर्न सकिएन भने नेपाली नागरिकको अवस्था राज्यविहीन हुन्छ । कारण २०६३ बाट अधिनायक सामन्तवादको उदय भएको छ । संघीयताको माध्यमबाट राज्यलाई विण्डन गरिँदै छ । धर्म निरपेक्षताको घोषणाले समाज बिखण्डन गर्ने काम गरिरहिएको छ । नेताहरू भ्रष्ट छन् । नेताहरूकै अकर्मन्यताको कारण राज्य अस्थिरतामा फसेको छ । राष्ट्रिय एकता बिना संरक्षणका आधारहरू असम्भव छन् ।
जब संवैधानिक प्रजातन्त्रको स्थापना हुन्छ, मानव भावनाहरू एकत्रित हुन्छन् । कानुनको विशिष्टतामा कार्यान्वयनका पक्षहरू मर्यादित हँुदा स्वामित्वको अधिकारले जनताहरूको भावनामा राष्ट्रियताको महत्व जागृत गराउँदछ । स्वाधिनता, समानता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकताको महत्व राज्य संमृद्ध हुन्छ । संस्थागत राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रादेशिक संरचना, निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय, मर्यादित अभिव्यक्ति, वैचारिक प्रतिस्पर्धा र बौद्धिक राष्ट्रियसभा राज्य अस्तित्वका वैज्ञानिक आधार हुन्छन् । अर्थात् संवैधानिक प्रजातन्त्रको लागि संवैधानिक शासन, निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय र मर्यादित अभिव्यक्ति जस्ता विशेषता हुन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय प्रभावबारे पनि बिशेष चासो राख्नुभएको छ तपाईले । नेपालको सामरिक महत्व विशिष्टको छ । प्राकृतिक अस्तित्वहरू महत्वका छन् । साँस्कृतिक सभ्यता महत्वको छ । सीमालाई भारत र चीन जस्ता बिशाल देशका भुमीले छेकेको छ । आकाशीय दुरीको हिसाबले युरोप र अमेरिकीहरूसमेत नजिक छन् । वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्दा नेपालको सामरिकता बराबर दुरीमा छ । आधुनिकताको लागि नेपालको अस्तित्व बिज्ञानको महत्वपूर्ण विन्दुमा उभिएको छ । महत्व स्पष्ट हुन उपलव्धिको सार्थकता अनिवार्य हुन्छ ।
हालै मात्र सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको सवालमा तपाईको धारणा के हो ?
हामी प्रजातन्त्रवादी हौ। प्रजातन्त्रवादीले जनमतको सम्मान गर्न आवस्यक छ र गर्नु पनि पर्दछ । हाम्रो भनाई त्यति मात्र हो, नेपालको राष्ट्रि«य अस्तित्व खतरामा छ । संविधानका धाराहरू विभेदित छन् । न्यायालय पक्षपातपूर्ण छ । जनताहरू अपहेलित छांै । सरकार निरंकुस छ । स्थानीय निर्वाचन संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई बैधानिकता दिन स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दवावका कारण धर्म, संस्कृति र धरोहरहरू समाप्त गरिएका छन् । राज्य दिन प्रतिदिन विखण्डनको प्रकृयामा अघि बढेको छ । जबसम्मे सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त हुन्छ, राष्ट्रियता खतरामा रहिरहन्छ । नीति, नियम र नेतृत्वको दक्षताले राज्यमा भएका युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि ल्याउन सकियो भने मात्र राज्य सम्मृद्ध हुन्छ ।
अर्को पक्ष हो नेपालीहरू जहाँ बसेका छौं नेपाली हुन्छौं । बसोबास जता भए पनि मानवीय स्वाभिमान नेपाली हुन्छ । स्वामित्वको संरक्षण सम्बन्धित राज्यले गर्दछ । आत्माको संरक्षण नेपालले गर्नुपर्दछ । अर्थात् राज्यमा बस्ने नागरिकहरूको लागि मात्र नभएर विश्वमा रहेका नेपालीहरूको स्वाभिमानको लागि नेपाल भन्ने देश बच्न आवश्यक छ । जानकी, लुम्बिनी, पशुपती जस्ता संस्कृतिको साथै कोशी, काली, गण्डकी र सगरमाथा जस्ता जल सम्पदा साथ धरोहरहरू बाच्न आवश्यक छ । हामीले देशको अस्तित्व संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सरकारको निर्माण भनिरहेका छौं । राज्य बचाउन संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दु राज्यको स्थापना आवश्यक छ ।
तपाईले यति मुद्दा उठाइदिनुभयो की जुन मुद्दाको बिषय बुझ्न गाह्रो भएको अवस्थामा छ । अब समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ?
नागरिक स्वाभिमानको पक्ष राज्यको महत्वमा मुखरित हुन्छ । प्रजातन्त्रको आशय संविधान, नियम र कानुनहरू जनताको पक्षमा बन्दछन् । स्वाधिनताको संरक्षण गर्ने कार्यले नागरिकहरूको साथ प्राप्त गर्दछ । बिकासका कार्यहरू जनसहभागिता र औद्योगिक साझेदारको माध्यमले सफल बनाउँदछ । प्रविधिको भण्डार राज्यका गरिव जनताहरूले संकलन गरेका छन् । अस्तित्वका आधारहरू समान हुन्छन् । संवैधानिकताको विशिष्टता धयचमि अयलकतष्तगतष्यलब िाभमभचबतष्यल को स्थापनाले स्थापित गर्दछ । प्रजातन्त्र र समाजवाद जस्ता विषयको व्याख्या विश्वका विद्धान मस्तिस्कहरूले गर्दछन् । मुद्दा जसले उजागर गरेको छ, नेतृत्व उसैले गर्छ । वर्तमान सरकारले गर्न नसकेका कामहरू जब नेपाल समाजवादी कांगे्रसको सरकार निर्माण हुन्छ, कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन् । नेपाल समाजवादी कांगे्रसले अपनाउने राज्य संचालनको आधारले विदेशिएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्दछ । हाम्रो उद्देश्य नेपाललाई सम्मृद्ध बनाउने छ । सबै नेपाली जनताहरू मिलेर सम्मृद्ध बनाउनुपर्दछ ।
प्रदेश अर्थमन्त्री आङ्बो भन्छन्, कर र संघीयताबीच कुनै साइनो छैन
पाँचथरको क्षेत्र न. २ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’ ३५ वर्षकै उमेरमा जनमुक्ति से...
कांग्रेसको प्रतिवेदनले राजनीतिक गन्ध दिन्छ
पछिल्लो पटक निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारमा पनि भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर नगर प्रमुख सुरेन्द्र व...
राप्रपाका नेता पाठक भन्छन्, अहिले हामी कमजोर छौं, भोली बलियो बन्छौँ
प्रतिनिधिसभामा एक सीट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले पार्टी शुद्धिकरणमा अभियानमा जुटेको...
रामबहादुर चौहानको प्रश्न, बरियतामा कयौं गुणा तल भएकालाई हुक लगाएर तान्नुपर्ने कसरी आयो ?
दुई बाम पार्टी एकता भएपछि सबै जिल्लामा पदीय बाडफाँड भइरहेको छ । अधिकांस जिल्लामा एकले अध्यक्ष पाए...
निरौला भन्छन्, भारत र बेलायतको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने गोर्खालीले विदेशी पाहुनाको सुरक्षा गर्न सक्छन्
नेपाल समाजवादी कांगे्रसका महासचिव हुन् गोविन्द निरौला । उनको पार्टीले संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन...
त्रिलोक चन्द्र विश्वास भन्छन्, पुरुष होस्टेलभित्र केटीहरु लगेर राखि दिने ?
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष हुन्, त्रिलोक चन्द्र विश्वास विक । दलित आन्दोलनले ...